Kedu otu esi eme ka ịkpụ aka nwa gị?
Ịhịa aka n'ahụ maka nwatakịrị bụ ụzọ dị irè maka ịgwọ ọtụtụ ọrịa na ụzọ mgbochi. Ọhịa aka na-ewusi ahụ ike na nsogbu nke nwatakịrị ahụ, na-akwalite ihe dị arọ na ọganihu n'ozuzu ya. Ịhịa aka n'ahụ na-adabere na nro dị nro ma na-emetụ n'ahụ na ọrịa strok, na-eme ka ọnọdụ nwata ahụ dịkwuo mma, na-enye ike ma na-enyere aka iji zuru ike ma dị jụụ.
Mmetụta nke ịhịa aka n'ahụ n'ahụ
eme ka ike nke uru ahụ belata, belata ụda ụda;
nwere mmetụta nke ụbụrụ na usoro ahụ ụjọ;
mee ka e nwee mgbanwe nke anụ ahụ;
eme ka ọbara na-aga ngwa ngwa ma kpochapụ obere arịa.
Contraindications maka ịhịa aka n'ahụ
otutu ihe ngosi nke exthesative diathesis;
iwe na mmebi anụ;
ọrịa na ọrịa na-efe efe;
pyoderma, usoro purulent nke mpaghara ọ bụla;
ọrịa ọbara, ọbara ọgbụgba;
nnukwu usoro mkpali.
Anyị kwesịrị ịkwadebe ụmụ maka ụlọ akwụkwọ, n'ihi na a ga-enye ihe ngwongwo nwatakịrị ahụ ọrụ dị oke egwu ma buru ibu. Ịkwesịrị igbochi usoro mgbochi ahụ na onye na-azụ akwụkwọ ma ọ bụ onye na-agụ akwụkwọ. Ụzọ dị mma bụ ịhịa aka n'ahụ. Ụzọ maka ịhịa aka n'ahụ kwesịrị ịmụta nne.
Ndị klas mbụ nwere ike ime mgbanwe maka ọnọdụ ụlọ akwụkwọ, ị nwere ike ịhịa aka na nwata. Ọ bụ ịtọ ogwu tupu ị lakpuo ụra ma ọ bụ mgbe ị gbasiri ike. Nwa gị na-abịa n'ụlọ, nwere nri ehihie, mana tupu ị nọdụ ala maka nkuzi, anyị ga-eme oge ịhịa aka n'ahụ. Maka nke a, a na-etinye nwatakịrị ahụ ala n'elu ihe ndina ma ọ bụ sofa, nke a na-ejighị na ya.
Anyị na-etighachi nwa ahụ azụ na azụ ya. Ya mere kwuoghachi ugboro 15.
Jiri nwayọọ na mpaghara mkpịsị aka atọ. Anyị na-esi n'ubu gafee n'olu.
Ọkpụkpụ nke mkpịsị aka ga-aga n'akụkụ ya. Mgbe ahụ, m ga-eji okirikiri nke ọkpụkpụ azụ, na-esi n'olu gaa n'úkwù.
Site na nkwụ ọbụla, ntakịrị azụ na azụ, anyị ga-aga n'azụ nwa ahụ.
Ghichaa usoro ahụ na nrịanrịa dị mfe.
Mgbe ịhịa aka n'ahụ nwata ahụ dinara ala ruo minit ole na ole, na-eme ihe ndị miri emi ma na-eku ume. Mgbe nke ahụ gasịrị, nwatakịrị gị nwere ike ịmalite ịmalite ọmụmụ ihe.
Olee otu esi enyere nwata aka ma o buru nri?
Otu esi eme ka ntuputa nke nwatakiri dichaa
Ịwa ahụ ụmụaka, njigide
Kedu otu esi ewusi nwatakịrị ahụ ike n'ụlọ?
Rubella na ụmụaka: mgbaàmà, ọgwụgwọ
Ihe na-eri nri ụmụaka, ihe mgbaàmà
Họrọ uwe mara mma mara mma na nke ejiji na prom na ogige
Ọrụ nwa oge n'okpuru nkwekọrịta ahụ
Iwu maka nhazi nke uwe-akwa
Gini mere nsogbu na-emebi ntutu isi anyị
Ihe kacha mma maka ihe ịrịba ama niile nke zodiac
Ihe osise dị iche iche maka February 23 na nna ha - site na akwụkwọ, igbe, kaadiboodu - maka ụlọ akwụkwọ, nke obere na ndị okenye nke ụlọ akwụkwọ ọta akara - Nkụzi ọmụmụ na foto site na nkwụsị ụkwụ maka ịmepụta aka site na February 23
Inhalation ke ufọk
Olga Buzova na-akpọsa dọkịta na-awa maka ... maka ịmalite ime ara
Onye Nwunye Valeria Lanskaya
Vareniki na-agba mmiri na cheese
Nri ofe ogwu na ginger
Àgwà nke nkịta ụmụ anụmanụ
Natalia Poklonskaya ji ihe ngosi nke onye nkiri ahụ si na fim onye nkụzi Matilda kọwaa
Nri nri dị ụtọ nke ire
Gịnị bụ lamination na ọ bụ na-emerụ ahụ maka ntutu isi?
Kedu ụmụ okorobịa kacha mma?
Kedu ka ị ga-esi akpa àgwà ọma site na enyi nwanyị enyi gị?